मन्त्री रमेश लेखकले एक कानले सुनेर अर्काे कानले उडाइदिएपछि…. – YesKathmandu.com
शनिबार ०४, मङि्सर २०७३
दिक्तेल । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणधिन रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत हलेसी – दिक्तेल सडक (३५.५ किलोमिटर) खण्ड ठेकेदार कम्पनीहरुको लापर्बाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।
लुम्बिनी कन्काई सूर्य जेभी, (१२किलोमिटर), लामा नागार्जुन जेभी (१२ किलोमिटर) र लामा नागार्जुन त्रिशुली जेभी (११.५किलोमिटर) कम्पनीले कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी तथा कन्ट्रयाक्टर रामबहादुर पाख्रिन भन्छन्–‘सडक रेखाङकनभित्र परेको स्थानीयबासीहरुको जग्गा र घरको मुआब्जा दिएको छैन । ठेकेदाहरुले विद्युत प्रशारण लाइनको पोल हटाएको छैंन । भवन डिभिजन कार्यालयले घरको मूल्याकंन नगर्दा मुआब्जामा प्रभावित भएको छ । महिनैपिच्छे योजना प्रमुखहरु फेरिएको छन् । अहिले सम्म सम्बन्धित निकायले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैंन ।’
पटक पटक राजधानीबाट अनुगमनका लागि आएका डाइरेक्टरहरु हलेसी महादेवको दर्शन गरि फर्किने मात्रै गरेका छन् । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पहल नभएको हर्कपुर सडक डिभिजन कार्यलयले एसकाठमाडौंलाई जानकारी गराएको छ ।
हलेसी – दिक्तेल सडक योजना कार्यालय स्थापित भएको दुई बर्ष बढी भैंसकेको छ । त्यस यता ६ जना योजना प्रमुख परिवर्तन भईसकेका छन् भने हाल कार्यालय योजना प्रमुख बिहिन छ । अहिले कार्यालयमा कर्मचारी पनि बस्दैनन् । डि.ई. नियुक्ति लिएर पुग्ने बित्तिकै सरुवा भइहाल्छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर,ओखलढुंगालाई रेखदेख तथा कार्यसञ्चालन गर्न निर्देशन भएतापनि उक्त डिभिजनले ३ वटा जिल्ला हेर्न नसक्ने पूर्व डिभिजन प्रमुख दिप बराही बताउँछन् ।
आयोजना नियुक्ति नहुनाका कारण हलेसी – दिक्तेल सडक योजना निर्माण कार्यमा प्राबिधिक सहयोग नपुग्नुका साथै सडक रेखाङकनभित्र परेका जग्गा र घरको मुआब्जा वितरण कार्यमा समेत प्रभाबित भएको छ ।
यता, आयोजना निर्देशनालय (एडिबि) संगको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले उक्त सडकखण्डको कालोपत्रे गर्नुपर्ने समयावधी ५ महिना मात्र बाँकी छ । सडक धुलाम्मे छ । हिउँदको समयमा धमाधम काम गर्ने बेला सुनसान देखिएको छ । हालसम्म स्थानीयबासीहरुले घर तथा जग्गाको मुआब्जा दिने भनिएपनि पूरै भूक्तानी दिइएको छैंन ।
उक्त सडक दक्षिण एसियाली उप–क्षेत्रीय सडक सञ्जाल परियोजना अन्तर्गत आयोजना निर्देशनालय (एडिबि) तथा सडक विभागको समन्वयमा अनुगमन, रेखदेख, तथा निर्माण कार्यमा देखिएका अबरोध हटाउने सम्बन्धित निकाय नै मौन छ ।
नवयुगलाई जापानले बल्ल चिन्यो
जसले खुसी साट्न पाएनन्, अफसोच न जन्मदिन मनाइयो न सफलताको उत्सव
जब शासकलाई भोक लाग्छ
सुन तस्करी प्रकरण , फरार एसएसपी खत्री अदालतमा उपस्थित
एआईजी विज्ञानराज शर्माको नेतृत्वमा तिवारी हत्याकाण्डको छानविन समिति बन्यो
धर्म परिवर्तनको कानुनी अधिकार माग्दै क्रिश्चियनले संसदमा पठाए ४० हजार पत्र
आवेग होइन जिम्मेवारी पुर्वक संसदमा प्रस्तुत हुनुहोस
एक लाख १० हजार नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिदै
शीर्ष तीन दलको बैठकमा को को छन सहभागी ?